Madaxweynaha Soomaaliya oo kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada ee magaalada Marka – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada ee magaalada Marka
STN News October 15, 2018 Leave a comment
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo malaintii labaad ku sugan gobolka shabeelada Hoose ayaa xalay Magaalada Marka kulamo kula qaatay saraakiisha Ciidamada,maamulka Degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay Tallyeyaasha ciidamada Guutada 14-October oo ah ciidankii ururka AL-shabaab ka saaray magaalada Marko oo mudo dheer ay maamulayeen sidoo kalena dib u heshiisiinta ka dhex bilaabay maleeshiyo beeleed mudo badan halkaas ku dagaalamayay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in kadib markii uu la kulmay saraakiisha Guutada 14-October loo soo gudbiyay macluumaad badan oo ku saabsan howlaha ay magaalada kawadaan iyo hab dhaqankooda wuxuuna ku bogaadiyay shaqadooda isagoo sheegay inay xaqiijiyeen qaranimada maadaama ay magaalada Marka AL-Shabaab ka saareen walina gacanta ku hayaan sidoo kalena qaab wanaagsan ay ula dhaqmayaan dadka deegaanka.
Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu isla maanta booqdo saldhigyada ciidamada 14-Oct ay ku leeyihiin magaalada marko iyo deegaanada dhaca xeebaha magaalada sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo la qaadan doono hogaan dhaqameedka magaaladaasi si loo sii dhamaystiro dib u heshiisiinta maleeshiyaadkii mudada ku dagaalamayay magaaladaasi.
Shalay markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo gaaray magaalada Marko waxaa soo dhawayntiisa ka qayb qaatay boqolaal ka mid ah shacabka magaalada waxana lagu wadaa inta uu halkaas joogo inuu kulamo kale la qaato qaybaha bulshada.
← Xoghayihii hore ee wasaaradda cayaaraha oo maxkamad la soo taagayo
Kulan ku saabsan imtixaanada qaran oo maanta qabsoomaya →